I-Linux inesixhobo esitsha semveli se-CAD-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-Linux inexhobo entsha ye-CAD yesizwe
Ngokungafani nendawo yeGeospatial apho izicelo ezivela kwi-Open Source zingabonakali ezizimeleyo, isofthiwe esincinci kakhulu esiyibonayo kwiCAD ngaphandle kweyathelo FreeCAD isenendlela ende ekusafuneka ihanjiwe. Ngelixa Blender Esi sisixhobo esomeleleyo, ukujolisa kwayo kukuopopayi hayi kwiCAD esetyenzisiweyo kubuNjineli, uLwakhiwo kunye noKwakha. Indlela ukufana kunye newayini ekusombulula ingxaki yeqonga lomnqamlezo kuye kwaba yinto ethembekileyo kwabo banethemba lokusebenza neMac okanye iLinux, kwaye ngelixa i-AutoDesk iqala ukumilisela iinguqulelo ze-Mac Ngo-2010, iLinux ibonakala ngathi ayinaso isixhobo esinjenge-AutoCAD okanye iMicrostation. Ngokuqhelekileyo Ares y eMedusa izixhobo ezivuthiwe kunye nabambalwa abanenkxaso yePC, iMac kunye neLuxu.
Ngoku i-Bricscad ibhengeziwe, esinye sezisombululo sokuba nangona yaqala kwi-IntelliCAD, kwiminyaka embalwa edlulileyo sele liqonga elizimeleyo lolo hlobo kwaye mhlawumbi ngenxa yokuma kwayo nabameli kwinqanaba lehlabathi, ngokukhula okuthembisayo (iilayisensi ezili-100,000). Zininzi izinto ezenzekayo kwi-CivilCAD zombini kwindawo yovavanyo, enje ngobunjineli kunye nemodeli. Izisombululo ezinje KwiCACC ugijima phezu kweBricscad ukuxazulula ukuphazamiseka kokudinga i-AutoCAD inguqu epheleleyo ukuqhuba; Ngubani owaziyo ukuba kwixesha elide sinokuthi sibe ne-CivilCAD ye-Linux.
Phakathi kwezona ezihle Bricscad V12 isebenza ngqo kwi DWG ngaphandle efuna kwamanye amazwe okanye yokungenisa, kubandakanywa AutoCAD uyakuqonda neefomathi ukusuka 2.5 ukuya 2010 (ayibandakanyi ngefomathi entsha AutoCAD 2013 Kufika nje). Sele kwezi nguqulelo izinto ezinje ngeparametric constraints zifakiwe.
Inyaniso yokuba esi sixhobo sakhutshwa kwi-IntelliCAD, nangona kungenjalo, ibuyisela inxenye yelifa elifana nokwamkelwa kwefomathi ye-DWG kunye nokugcina ukusebenza kokusebenza kuninzi lweendlela zalo. Kungenxa yoko le nto i-LISP, i-BRX, i-ARX kwaye kwimeko yeWindows VBA isebenza.
Oku kunceda ukuba kube lula ukufumana abasebenzisi abanobuchule esi sixhobo kunye nokunciphisa ijika lokufunda; Kuyatshiwo ukuba umsebenzisi we-AutoCAD ngeveki sele ekwindawo entsha ngaphandle kokufuna ikhosi ebanzi. Ngaphandle koko, i-Bricscad ivelise ukusetyenziswa kwezixhobo ezinje nge-quad, apho inani lokucofa kwiindlela eziphindaphindayo okanye ezicetyiswayo zokuhamba komsebenzi zincitshisiwe, ngakumbi kwimodeli ye-3D.
I-Cosilla ene-, eyenza ingqwalasela:
Unikezelo lubhabha, oko kuthetha ukuba usebenza kuyilo kwaye umboniso wezinto ukwimeko yokunikezela. Kwimeko yezinye izisombululo, oku kunokwenzeka kuphela njengomboniso kamva kunye nomfanekiso.
Uyakwazi ukuhlela izalathisi zeefayili zangaphandle.
Ukucutshungulwa kweCandelo lezinto ze-3D ngokunikezelwa kufakiwe, kunye nokukhetha ukuwasebenzisa kwakhona kwimifanekiso (kungekuphela kwendlela)
Unokutshintsha ukucwangciswa kwamashicilelo okushicilela (amacebo) ngexesha elinye, kuquka ukukopishwa kwezakhiwo ukusuka kolunye ukuya kwelinye.
Imilinganiselo inxulunyaniswa namanqaku ekubhekiswa kuwo, ke xa uhambisa into, ubungakanani butshintsha ngokuzenzekelayo ngaphandle kokuhlela iindawo. Oku nakwindawo yephepha.
Kuyamangalisa indlela esebenza ngayo, kunye nemfuneko encinci. I-Windows isebenza kwi-256 MB ye-RAM kwaye ikhuthaza i-1 GB; ngokuchasene ne-AutoCAD 2012 kunye ne-2013 ebonisa i-4 GB.
Kwimeko yeLinux, ibaleka kulwabiwo lulandelayo (okanye ngaphezulu): I-Fedora 14, OpenSuse 11.3, Ubuntu 10.04
Ngokumalunga nexabiso: Okwesihlanu kwindleko ze-AutoCAD.
Ekugqibeleni sibheka iindaba ezithakazelisayo, i-Bricscad V12 ye-Linux.
Apha banako uyikhuphe ukuhlola
Apha uyazi ngaphezulu kwiBricscad
Apha ungabona izicelo eziphuhlisiwe kwiBricscad
UWilfredo Farias uthi:
Ndifuna isiluleko ukuze ndikwazi i-goart ye-goart kunye ne-autoCAD izicelo. Ndiyinjini yoluntu